Igumbi kwindlu ekufutshane neWrocław :)
Indlu yiprojekthi yethu yokuqala, i-marina yethu kunye nendawo esiyithandayo.
Isinikezelo sam sikufuphi: izithuthi zikawonke-wonke-ukufikelela kumbindi weWrocław ngololiwe ohamba nedolophu imizuzu engama-22, iibhasi zangaphantsi kwedolophu, iipaki. Uya kusithanda isipho sam ngenxa ye: ikhitshi, i-cosy, amagumbi aphezulu, iimbono kunye nebhedi ekhululekile.
Isihlalo sam silungele: izibini, abahambi ngezoshishino, iintsapho (ezinabantwana) kunye nabahlobo abanoboya (izilwanyana zasekhaya).
Unyana wethu uMaksymilian uhlala ngokusisigxina ekhaya, uya kukwamkela, akuncede kwaye akucebise.